Iibso Yaxaas Yaxaas Taayland Taarikhda Lagu Baro Nabarrada - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Yaxaas Yaxaas Thailand Caleenta Baabi'inta Nabarrada
Yaxaas Yaxaas Thailand Caleenta Baabi'inta Nabarrada gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Lambarka Moodalka: ZTY9637A
Nafaqada: 5 sano
Asal ahaan: Thailand
Wax ku ool: Waa qaaciido qadiimi ah oo Thailand ku taal, oo laga sameeyay saliidda yaxaaska, cunnada lafaha yaxaaska, iyo nuxurka dhirta dabiiciga ah. Waxay kakoobantahay borotiin, taurine, walxaha raadraaca, dufanka aan dhergin, iyo waxyaalaha laga soosaaray dhirta Waxay saameyn wanaagsan ku leedahay yareynta laalaabka, wareegyada madoobaadka, fin-doobka, finanka, hagaajinta nabarrada, gubashada, daciifnimada maqaarka, iwm.
Qaado qadar ku habboon kareemyada yaxaaska oo si tartiib ah u duug 3 ilaa 5 jeer, 2 ilaa 3 jeer maalintii. Isticmaal hal jeer ka hor intaadan seexan.
Haweenka uurka leh iyo carruurta waa inaysan qaadan
Alaabtaan waxaa loogu talagalay isticmaalka dibadda, fadlan ha cunin
Fadlan ka fogee meel carruurtu gaarto
Ku kaydi meel qabow
Talo: Saamaynta iftiinka iyo kormeeraha darteed, waxaa jiri doona xoogaa farqi ah oo u dhexeeya shayga dhabta ah iyo sawirka.
1 Caag Yaxaas Thai Dhalo ah
Waad ku mahadsan tahay alaabta! Wax walba si fiican ayaa loo buuxiyaa, oo lagu helaa boostada. Waxaan kula talinayaa iibiyaha, waxaan kula talinayaa dukaanka. Cadarku wali ma furin.
amarada waxay qaadataa bilo kahor intaysan imaan, waxay igu niyad jabineysaa inaan dalbado alaabooyin dheeri ah